ချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ အလိုအလျောက် ဆိုလာပြား သန့်ရှင်းရေး ဘရက်ရှ် ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
China Automatic Solar Panel သန့်ရှင်းရေး Brush ထုတ်လုပ်သူများ စတော့ရှယ်ယာ
အလိုအလျောက် ဆိုလာပြား သန့်ရှင်းရေး ဘရက်ရှ် မိတ်ဆက်
အလိုအလျောက် ဆိုလာပြား သန့်ရှင်းရေး ဘရပ်ရှ် သည် လီသီယမ်ဘက်ထရီ၊ ဘက်ထရီမပါသော မော်တာ၊ ဂီယာတံ၊ သန့်ရှင်းရေးခေါင်း၊ သန့်ရှင်းရေး ဘရပ်ရှ်၊ သန့်ရှင်းရေးအဖုံး၊ ငှက်အမှုန်အမွှားများကို ဖယ်ရှားသည့်ခေါင်းနှင့် ပေါင်းပင်ချိတ်ဆက်ခေါင်း နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဆိုလာပြား သန့်ရှင်းရေး ဘရက်ရှ်သည် အသုံးဝင်ပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော တစ်ခုတည်းသော အသုံးချကိရိယာ ဖြစ်သည်။ .
အလိုအလျောက် ဆိုလာပြား သန့်ရှင်းရေး Brush ၏ အင်္ဂါရပ်
ဆိုလာပြား သန့်ရှင်းရေး ဘရပ်ရှ် သည် နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး အပင် အစိတ်အပိုင်းများ သန့်ရှင်းရေး၊ နေရောင်ခြည် စက်ရုံ အစိတ်အပိုင်း မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ငှက်၏ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် နေရောင်ခြည် စက်ရုံ ပေါင်းသတ်ခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် အသုံးချကိရိယာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း၊ မြင့်မားသော ထိရောက်မှု နှင့် ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချပလီကေးရှင်း၏ အင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်သည်။
အလိုအလျောက် ဆိုလာပြား သန့်ရှင်းရေး Brush ၏ ကန့်သတ်ချက်
လုပ်ဆောင်ချက် ဗို့အား 48V
ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် 15AH
Load Current 7-8A
Idle Speed 6000-8000rpm
ဘက်ထရီသက်တမ်း 3-4 နာရီ
Brush Diameter 200mm*2
သန့်ရှင်းရေး Brush ပစ္စည်းများ PVC
Brush Rod အရွယ်အစား 1.5-3 မီတာ
လည်ပတ်အပူချိန် အတိုင်းအတာ -30-60ºC
ပစ္စည်းအလေးချိန် 8.5 ကီလိုဂရမ်
အလိုအလျောက် ဆိုလာပြား သန့်ရှင်းရေး Brush တပ်ဆင်ခြင်း ကိစ္စ
1. တပ်ဆင်ခြင်း လမ်းညွှန် သန့်ရှင်းရေး စက်ရုပ် ပက်ကေ့ဂျ်တွင် အင်္ဂလိပ် လုပ်ဆောင်ချက် လက်စွဲ နှင့် MP4 ဖိုင် ဗီဒီယိုများ ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူအတွက် လုံလောက်ပြီး လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်ရန် လုံလောက်ပါသည်။ ၎င်းတွင် တပ်ဆင်နည်း၊ ထိန်းသိမ်းနည်း၊ ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ ၎င်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းတို့ ပါဝင်သည်။
2. တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နေသည့်လုပ်ငန်းကို စစ်တမ်းကောက်ယူရန်၊ တပ်ဆင်မှုပြုလုပ်ရန်နှင့် စက်ရုပ်လည်ပတ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် သင့်ဒေသရှိ နည်းပညာရှင်များထံ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ လေယာဉ်လက်မှတ်ခ ပေးချေပြီး နေရာထိုင်ခင်း စီစဉ်ပေးရပါမယ်။
3. နည်းပညာပံ့ပိုးမှု ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိ ဖောက်သည် ပံ့ပိုးကူညီရေးအဖွဲ့သည် သင့်အား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးပါမည်။ ဖုန်း၊ စာတိုက် သို့မဟုတ် ဖက်စ်ဖြင့်ဖြစ်စေ သင့်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကို ၂၄ နာရီအတွင်း တုံ့ပြန်ရန် အာမခံပါသည်။
4. Spare Parts Support Multifit Solar သည် ဤအမျိုးအစား သန့်ရှင်းရေးစက်ရုပ်၏ မူရင်းဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အပိုပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
hot Tags:: အလိုအလျောက် ဆိုလာပြား သန့်ရှင်းရေး ဘရက်ရှ်၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်